ကျောစတာရဲ့နရောမှာ အစားထိုးဖို့ ခြဲလျဆီးကွယျပှငျ့ကို စိတျဝငျစားနတေဲ့ အကျသလကျတီကို – Premier League Special
ကျောစတာရဲ့နရောမှာ အစားထိုးဖို့ ခြဲလျဆီးကွယျပှငျ့ကို စိတျဝငျစားနတေဲ့ အကျသလကျတီကို
အကျသလကျတီကိုအသငျးဟာ မကွာသေးခငျကမှ အသငျးနဲ့လမျးခှဲသှားတဲ့ တိုကျစဈမှူး ဒီယဂေိုကျောစတာရဲ့နရောမှာ အစားထိုးနိုငျရေးအတှကျ ခြဲလျဆီးတိုကျစဈမှူး ဂြီရူးကို ချေါယူဖို့ စိတျဝငျစားနတေယျလို့ သတငျးတှကေ ရေးသားဖျောပွနပေါတယျ။
အသကျ ၃၄နှဈအရှယျရှိ ပွငျသဈလကျရှေးစငျ ဂြီရူးဟာ ၂၀၁၈ ဇနျနဝါရီလက လနျဒနျဒါဘီပွိုငျဘကျ အာဆငျနယျအသငျးကနေ ပေါငျ ၁၅.၃ သနျးနဲ့ ခြဲလျဆီးကို ရောကျရှိလာသူဖွဈပွီး အသငျးအတှကျ ပွိုငျပှဲစုံ ၁၀၃ ပှဲမှာ ၃၇ဂိုအးထိ သှငျးယူပေးထားပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ ပွငျသဈအသငျး ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားခနျြပီယံဖွဈခဲ့ရာမှာ အဓိကနရောကနေ ပါဝငျခဲ့သူ ဂြီရူးရဲ့လကျရှိစာခြုပျသကျတမျးက လာမယျ့နှရောသီမှာ ကုနျဆုံးတော့မှာဖွဈပွီး မကွာသေးခငျကထှကျပျေါခဲ့တဲ့သတငျးတှအေရ အသငျးနဲ့လမျးခှဲဖှယျရှိနကွေောငျး သိရပါတယျ။
အကျသလကျတီကိုအသငျးကလညျး ကျောစတာရဲ့နရောမှာ အစားထိုးဖို့ ပွငျဆငျနပွေီး အသကျ ၃၂နှဈအရှယျရှိ ကျောစတာဟာ ၂၀၂၁ နှရောသီမှာ ကုနျဆုံးမယျ့ စာခြုပျကို စောစီးစှာဖကျြသိမျးကာ အသငျးနဲ့လမျးခှဲသှားခဲ့ပွီဖွဈပါတယျ။
စပိနျလကျရှေးစငျ ကျောစတာဟာ ၂၀၁၄ ခုနှဈက ခြဲလျဆီးကို ရောကျလာခဲ့ပွီးနောကျ ၄နှဈအကွာမှာ အကျသလကျတီကိုအသငျးကို ပွနျလညျပွောငျးရှလေ့ာခဲ့သူဖွဈပါတယျ။
စကိုငျးစပို့တျသတငျးဌာနရဲ့ဖျောပွခကျြအရ ဒီလို အကျသလကျတီကိုနဲ့ ကျောစတာ စာခြုပျဖကျြသိမျးလိုကျတာက ပုဂ်ဂိုလျရေးကိစ်စတှကွေောငျ့လို့ သိရပွီး လာလီဂါမှာ ခနျြပီယံဖွဈဖို့ အခွအေနကေောငျးနတေဲ့ အကျသလကျတီကိုက ပရိသတျအကွိုကျဖွဈတဲ့ ကျောစတာရဲ့နရောမှာ အစားထိုးဖို့ ပွငျဆငျနပေါတယျ။
Daily Mail သတငျးဌာနရဲ့ဖျောပွခကျြအရ ကျောစတာဟာ ပရီးမီးယားလိဂျကို ပွနျလာဖို့ ရပေနျးစားနပွေီး အဓိကတိုကျစဈမှူး ရာအူးလျဂြီမီနကျဇျကို ကာလရှညျဆုံးရှုံးထားရတဲ့ ဝုဗျအသငျးက သူ့ကို ချေါယူနိုငျဖို့ သတငျးကွီးနပေါတယျ။
ကော်စတာရဲ့နေရာမှာ အစားထိုးဖို့ ချဲလ်ဆီးကြယ်ပွင့်ကို စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ အက်သလက်တီကို
အက်သလက်တီကိုအသင်းဟာ မကြာသေးခင်ကမှ အသင်းနဲ့လမ်းခွဲသွားတဲ့ တိုက်စစ်မှူး ဒီယေဂိုကော်စတာရဲ့နေရာမှာ အစားထိုးနိုင်ရေးအတွက် ချဲလ်ဆီးတိုက်စစ်မှူး ဂျီရူးကို ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ သတင်းတွေက ရေးသားဖော်ပြနေပါတယ်။
အသက် ၃၄နှစ်အရွယ်ရှိ ပြင်သစ်လက်ရွေးစင် ဂျီရူးဟာ ၂၀၁၈ ဇန်န၀ါရီလက လန်ဒန်ဒါဘီပြိုင်ဘက် အာဆင်နယ်အသင်းကနေ ပေါင် ၁၅.၃ သန်းနဲ့ ချဲလ်ဆီးကို ရောက်ရှိလာသူဖြစ်ပြီး အသင်းအတွက် ပြိုင်ပွဲစုံ ၁၀၃ ပွဲမှာ ၃၇ဂိုအးထိ သွင်းယူပေးထားပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ပြင်သစ်အသင်း ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ရာမှာ အဓိကနေရာကနေ ပါဝင်ခဲ့သူ ဂျီရူးရဲ့လက်ရှိစာချုပ်သက်တမ်းက လာမယ့်နွေရာသီမှာ ကုန်ဆုံးတော့မှာဖြစ်ပြီး မကြာသေးခင်ကထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေအရ အသင်းနဲ့လမ်းခွဲဖွယ်ရှိနေကြောင်း သိရပါတယ်။
အက်သလက်တီကိုအသင်းကလည်း ကော်စတာရဲ့နေရာမှာ အစားထိုးဖို့ ပြင်ဆင်နေပြီး အသက် ၃၂နှစ်အရွယ်ရှိ ကော်စတာဟာ ၂၀၂၁ နွေရာသီမှာ ကုန်ဆုံးမယ့် စာချုပ်ကို စောစီးစွာဖျက်သိမ်းကာ အသင်းနဲ့လမ်းခွဲသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
စပိန်လက်ရွေးစင် ကော်စတာဟာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်က ချဲလ်ဆီးကို ရောက်လာခဲ့ပြီးနောက် ၄နှစ်အကြာမှာ အက်သလက်တီကိုအသင်းကို ပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
စကိုင်းစပို့တ်သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရ ဒီလို အက်သလက်တီကိုနဲ့ ကော်စတာ စာချုပ်ဖျက်သိမ်းလိုက်တာက ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိစ္စတွေကြောင့်လို့ သိရပြီး လာလီဂါမှာ ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ အခြေအနေကောင်းနေတဲ့ အက်သလက်တီကိုက ပရိသတ်အကြိုက်ဖြစ်တဲ့ ကော်စတာရဲ့နေရာမှာ အစားထိုးဖို့ ပြင်ဆင်နေပါတယ်။
Daily Mail သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရ ကော်စတာဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်ကို ပြန်လာဖို့ ရေပန်းစားနေပြီး အဓိကတိုက်စစ်မှူး ရာအူးလ်ဂျီမီနက်ဇ်ကို ကာလရှည်ဆုံးရှုံးထားရတဲ့ ၀ုဗ်အသင်းက သူ့ကို ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ သတင်းကြီးနေပါတယ်။
နောကျတနျး ကစားသမားပဲကှာ ဂိုးမပေးအောငျကာကှယျသှားတာဆနျးလား….? ဟုတျကဲ့ ဘိုငျလီ ဖွဈနတေဲ့အတှကျ ဆနျးပါတယျ….
တော့တငျဟမျမှာ ခွစှေမျးပွနတေဲ့ ဆှနျဟောငျမငျကို ပွောငျးရှကွေ့ေးကွီးကွီးပေးပွီး ချေါယူလိုနတဲ့ ဇီဒနျး